Izindlela ezi-5 Zokuhlomula Zokuthengisa ezivela ku-Hyperlocal Social Monitoring | Martech Zone
Amafemu okuthengisa ancintisana nemidondoshiya yezitolo eku-inthanethi efana nayo Amazon futhi Zappos. Izitolo zezitini nodaka zihlose ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle kumakhasimende abo. Ukuhamba ngezinyawo kuyisilinganiso sokugqugquzela nentshisekelo yamakhasimende (kungani umuntu akhethe ukuza esitolo azothenga lapho inketho yokuthenga online itholakala).
Inzuzo yokuncintisana noma yimuphi umthengisi anayo ngaphezu kwesitolo esiku-inthanethi ukuthi umthengi useduze futhi ukulungele ukuthenga. Imizamo yokumaketha esekwe endaweni iya ngokuya ihlanjululwa futhi inikezela ngezindlela eziningi zokuhola umthengi emnyango wakho nasekuthengeni.
Kuyini ukumaketha kwe-Hyperlocal?
Ukumaketha kwe-Hyperlocal empeleni bekude isikhathi eside kune-Intanethi. Ikhebula, iphephandaba, kanye nabathengisi beposi abaqondile bakwazile ukukhomba ukumaketha kumaqoqo amakhulu kakhulu emakhaya namabhizinisi ukulethwa okwenzelwe wena uqobo. Ukusheshisela phambili manje futhi i-hyperlocal ngokuvamile kubhekisa ekhonweni lokungena kwimidiya eku-inthanethi noma kuselula bese ukhomba indawo okuyiyo ngqo yamathemba, ukuletha ukunikezwa okufika ngesikhathi kubo njengoba befika endaweni ethile.
Kuyini ukumaketha kwe-Omni-Channel?
I-Omni-Channel Marketing isho ukukhuthazwa kanye nokukhangisa okuhlelwe ngobuchule kuzo zonke izangoma ezitholakalayo nezenziwe ngcono ukufinyelela lokho. Ngaphandle kwesitolo sangempela sokuthengisa, ukuxhumana kwezinsimu eziseduze (NFC), ukusondelana nokumaketha, I-SMS ne-MMS, Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula, Ukumaketha Nge-imeyili, Ithelevishini, Umsakazo, Imeyili Eqondile, Izincwadi Zekhathalogi namanye amathuba angasetshenziswa ukukhuthaza ukunikezwa okunikezwa abathengi nabamabhizinisi abazoba khona.
Iyasebenza Isu lokuthengisa lokukhomba kuyisihluthulelo sempumelelo yamafemu okuthengisa. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obususelwa endaweni ukuqapha imithombo yezokuxhumana kanye nokuhlonza amathemba kuyindlela ethembekile futhi esebenzayo yokumaketha kubathengi abazoba ngabathengi.
Ukumaketha kwesiteshi se-Omni kanye nokufinyelela kubalulekile kumafemu okuthengisa njengoba kunciphisa igebe lesipiliyoni sangempela nesipiliyoni sesitini nesitolo. Ngokwesibonelo, Isitolo se-Apple, ukuklama, ukusebenza ngokushelelayo, kanye nensizakalo yamakhasimende enomdlandla incoma amasevisi abo aku-inthanethi njenge-iTunes, i-App Store (izincomo), njll. konke kusiza ekuthengiseni ukuphela esitolo esidayisa.
Izindawo Ezingu-5 Zokuthengisa Zisizakala kuma-Hyperlocal Social Monitors
Finyelela Ngaphandle Ngenkathi Ithemba Lakho Linake - Abaqaphi be-Hyperlocal Social bangasebenza njengezindlela zokuxhumana ezisebenzayo nezenziwa. Uma umsebenzisi athumele iTwitter online, kunesikhathi esincane (cishe imizuzu engama-2-3) lapho umsebenzisi elindele impendulo, izwi, noma umbono walokho okuthunyelwe. Uma amafemu okuthengisa ephendula ngaphakathi kwalelo windi, azothola ukunakwa okuphelele kwekhasimende. Impendulo kumele inikeze ukubizelwa esenzweni, noma yakhe ingxoxo.
Ukunqoba Komuntu Okungaqondakali - Ukumaketha kuyasebenza uma kwenziwa ngezifiso kakhulu futhi kuhambisana nendawo okukhulunywa ngayo. Ngama-Hyperlocal Social Monitors, amafemu athengisa izinto angakwazi ukubhekana nezidingo zendawo ngempumelelo nangaphezulu, futhi akhe ubuhlobo obusondelene kakhulu phakathi komkhiqizo nekhasimende.
Ukukhomba Abathonya Komphakathi - Abathonya bezenhlalo abakwazi ukutholakala ngokubabheka nje. Kodwa-ke, amanye ama-Hyperlocal Social Monitors ahlinzeka ngamathuluzi nezici ezidingekayo ezizonikeza ukuqonda okujulile kumsebenzisi wezokuxhumana noma kumakhasimende. Izikolo zeKlout, abalandeli, noma inombolo yabangane kuyizinkomba ezibalulekile ekubalulekeni kokuhlangenwe nakho komuntu ngesikhathi sokuthenga kwabo. Abagqugquzeli abanomvuzo kuzoba yindlela elula neyona elula yokufinyelela kumakhasimende amasha endawo futhi unike amandla umkhiqizo endaweni yangakini.
Iphoyinti Lokuthengisa liyisihluthulelo - Amakhasimende asebenzisa izinkundla zokuxhumana ukufinyelela emhlabeni ukuthola umbono walokho abafisa ukukuthenga. Ukuthenga okukhuthaza, ngokwabelana ngokuthengisa kwalolo suku, noma ukuvuza amaphuzu atholakele… njll ikhasimende lizokhuthazeka kakhulu futhi kungenzeka lithenge leyo nto. Amakhasimende awahlali azi amadili amahle ngaso sonke isikhathi, futhi ukuze aziswe azowenza ajabule ngokwengeziwe futhi akhe umuzwa ongcono wokwethembana nomkhiqizo.
Linganisa Impumelelo - Ambalwa amathuluzi we-Hyperlocal Social Media ahlinzeka ngokusebenza okwenza amabhizinisi akwazi ukukala impumelelo yecebo lawo lokuxhumana. Noma ngabe kuhlanganiswa i-CRM, i-BI, noma ukuhlanganisa idatha yemidiya yezenhlalo (umuzwa, ithonya, ukufinyelela) ngamamethrikhi okuthengisa, konke manje kungenzeka ngenxa yobuchwepheshe be-cross-platform - njengama-API nobuchwepheshe bamafu.
Mayelana ne-WeLink Hyperlocal Monitoring Social
WeLink's ithuluzi lokuqapha umphakathi, i-WeLink Social, lenzelwe ukufeza isizukulwane sokuhola se-geo-location. Inhloso yethu ukuthola izithameli zakho hhayi ngegama elingukhiye kuphela, kepha thola izithameli zakho endaweni, noma endaweni, oyithandayo.
Usebenzisa i-WeLink Social's geo-uthango ithuluzi lokuqapha, umakethi angamane abeke iphini phezu kwendawo okuthengwa kuyo, asethe irediyasi echaziwe yentshisekelo, futhi afinyelele ingcebo yedatha yemidiya yezenhlalo enamagama asemqoka entshisekelo nabasebenzisi bezokuxhumana abasendaweni eseduze.
Umthengisi angahlola imizwa, izingxoxo, ukubuyekezwa nezithombe ezilayishwe endaweni yezokuxhumana ngamanethiwekhi afana ne-Twitter, Instagram ne-Foursquare. Ipulatifomu ibuye inikeze ithuba lokuzibandakanya nekhasimende elithakaselayo ngokulinikeza izikhuthazi - kungaba ngesimo samakhuphoni, izaphulelo, amathiphu noma imininingwane - ukuvakashela indawo.
Tags: idatha yeselulai-hyperlocalukumaketha kwe-hyperlocalUkuthengiswa kwe-hyperlocalwendawoukumaketha okususelwa endaweniUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiidatha yeselulaidatha yezimayini zeselulanathan chandraeduze nokuxhumana kwensimunfcukumaketha kwesiteshi omniukusondelaukusondelana nokumakethaukumaketha okuthengiswayoisitolo sokuthengisaSocial Media Marketingi-solomowelink
UNathan uyi-Co-Founder ye- I-WeLink, ukuqapha imithombo yezokuxhumana kanye nesikhulumi sezikhangiso esihlosiwe esishayela inani kusuka ezingxoxweni zenhlalo ezisuselwa endaweni, okuvumela abathengisi ukuthi bahlunge inani elikhulu lemininingwane yezenhlalo kudeshibhodi elula kakhulu.